40 taonanny FFKM Hifarana ny volana ôktôbra 2021
Nosokafana taminny fiaraha-miombom-bavaka teny aminny EKAR Antanimena,
EKAR Anatihazo Isotry Tsy nisokatra ny fiangonana, be loatra ny mpiangona
Nanomboka omaly 13 septambra, no tokony nisokatra ny fiangonana katôlika rehetra, araka ny lamina napetraky ny arsevekanAntananarivo.
CEPE TANY SOFIA Mpiadina iray natokana efitra
Mpiadina iray niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE tany aminny Faritra Sofia, afaka omaly Talata 08 Septambra no nisedra olana kely.
Fankalazana ny fetinny fahaleovan-tena Haverina ireo tsipika eny aminny arabe
Ho fiatrehana ny fankalazana ny fetinny fahaleovan-tena, dia hisy ny asa famerenana ireo tsipika mandray ny faritra Carrefour Anosy,
Vokatry ny savorovoro tao Toamasina : Nahemotra aminny 2 ora ny fara-fodiana !
Raha tsiahivina dia nisy fisavorovorona nitranga tao Toamasina, ny alarobia hariva teo, rehefa nisy tovolahy iray voalaza fa maty, vokatry ny daroky ny mpitandro ny filaminana. Naneho ny heviny manoloana izany moa ny pôlisim-pirenena ary nametraka fepetra vaovao ny avy eo aminny fiadidian ny faritra Atsinanana.
Tontosa omaly maraina tetsy aminny Ministeranny Serasera sy ny Kolontsaina Anosy ny fifamindrana andraikitra teo aminny mpandrindra nasionalinny «Brigade anti-piratage » teo aloha, ny General de division MAKA Herman,
Nolanianireo solombavam-bahoaka ny talata 12 mai lasa teo teny aminny CCI Ivato ny volavolan-dalàna laharana faha-010/2019 tamin'ny 28 novambra 2019, izay mifehy ny famokarana biolojika eto Madagasikara.
Olona miisa 04 ahitana lehilahy 02 sy vehivavy 02 no voasambotry ny polisy miasa ao Analanjirofo izay isan'ny nandray anjara tamin'ny fanafihana mitam-piadiana niseho tao amin'ny fokontany Ambodihazinina kaominina Ambatoharanana Distrikani Fenerive-Est ny 05 May nifoha 06 May lasa teo.